Jose Mourinho oo fariimo raaxada uga qaaday Marco Verratti – Gool FM
“Waxaa laga yaabaa in Cavani uusan ku faraxsaneyn ku laabashada Ronaldo ee Manchester United” – Berbatov
(Paris) 13 Juunyo 2016. Macallinka cusub ee Man United Jose Mourinho ayaa la warinayaa inuu fariimo u dirayay xiddiga bartilmaameedka u ah Red Devils ee qadka dhexe u maamulka kooxda PSG Marco Verratti.
Verratti ayaa usbuucan u soo ifbaxay inuu bartilmaameed u yahay kooxda reer Egaland iyadoo jariiradda reer Talyaani Corriere dello Sport ay sheeganeyso inay ku doonayaan 79-milyan oo bound.
Wararka ayaa sheegaya in Red Devils ay dooneysay inay u bandhigto dalab uu sanadkiiba ku qaadanayo adduun dhan 6.7 milyan oo bound si uu laacibka reer Talyaani ugu soo dhaqaaqo Old Trafford.
Sikastaba, warkan ayaan markiisii hore ka imaan jariirada reer Talyaani oo waxaa la isla dhex qaadayay dalka Faransiiska tan iyo bishii June 11-keeda iyadoo uu baahiyay radio station Europe 1.
radio station Europe 1 ayaa sheeganaya in macallinka reer Portugal uu si joogta ah ula xiriirayay Veratti arrinka ku aadan soo dhaqaaqista wuxuuna fariimo u diray marar badan.
Verratti ayaa kula jooga kooxda reer France heshiis ku eg ilaa 2020 kaa oo waliba leh dooq sanad kale oo dheeri ah, umana badna inuu ka tagi doono PSG maadaama ay kooxdu waayi doonto xagaaga cusub dhaliyahooda Zlatan Ibrahimovic oo bilaash uga tagaya kaddib markii uu dhamaaday qandaraaska uu kula joogo.
Laakiin Jose ayaa durba muujiyay inuu doonayo in lacago badan ku khasiro suuqa oo wuxuu 30-milyan kula soo wareegay goor dhaweyd xiddig aan la garanayn Eric Bailly oo uu ka keenay naadiga Villarreal.
Express ayaa aaminsan in Mourinho uu suuqa ku qarash gareyn karo ilaa 200 oo milyan xagaagan.
Shaki la'aan Ibrahimovic wuu jecelyahay kooxdan! Waxa uu kulankii Republic Of Ireland xirnaa baasajeeriyadeeda...Waa tee?
EURO 2016: BEL VS ITA 0-2...Talyaaniga oo Belgium tumay + Sawirro